नेकपा विवाद: कार्यदलको बैठक आज १२ बजे बस्दै
Sat, Sep 26, 2020 at 7:26pm
'सरकार देश र जनताको काममा केन्द्रीत छ' #आहा खबर# जापानका नयाँ प्रधानमन्त्री सुगाद्वारा किमलाई भेट्ने चाहना व्यक्त #आहा खबर# प्रधानमन्त्री ओलीकी निजी चिकित्सक डा. शाहलाई कोरोना पुष्टि #आहा खबर# काेराेना संक्रमणबाट शनिबार थप ८ जनाकाे मृत्यु #आहा खबर# काठमाडाैं उपत्यकामा थप ७ सय २४ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टी #आहा खबर# शनिबार १ हजार २ सय ७ काेराेना संक्रमित थपिए, १ हजार १ सय ४७ जना कोरोनामुक्त #आहा खबर# दीपिकाले स्विकारिन् ड्रग्स च्याटको कुरा #आहा खबर# सप्तरीमा थप एक कोरोना संक्रमितकाे मृत्यु #आहा खबर# अब प्याजकाे मुल्य प्रतिकेजी ६० रुपैयाँ मात्र #आहा खबर# कोरोना संक्रमणबाट छाउनीमा उपचाररत थप एक सैनिक जवानको मृत्यु #आहा खबर# काठमाडौं उपत्यकामा एकैदिन १६ वटा सवारी दुर्घटना #आहा खबर# युक्रेनमा भएको सैनिक विमान दुर्घटनामा २५ जनाकाे मृत्यु #आहा खबर# जाेखिम कायमै भएकाले तत्काल विद्यालय नखोल्न शिक्षामन्त्रीकाे आग्रह #आहा खबर# काठमाडौं उपत्यकाका यी ५ ठाउँमा शनिबार बत्ती जाने #आहा खबर# बीपी प्रतिष्ठान धरानमा उपचाररत एक काेराेना संक्रमितकाे मृत्यु #आहा खबर#
काठमाडौं, ३१ साउन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को विवाद समाधानका लागि शुक्रबार गठित कार्यदलको बैठक आज बस्दैछ। कार्यदलको पहिलो बैठक दिउँसो साढे १२ बजे आफ्नै निवासमा बस्ने महासचिव एवम् कार्यदलका संयोजक विष्णु पौडेलले जानकारी दिए।
उनले कार्यदलले पार्टीको आन्तरिक जीवनमा देखा परेका समस्याहरू के हुन् ? आन्तरिक पार्टी एकता बलियो बनाउन के गर्नुपर्छ ? भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर कार्यदलले छलफल गर्ने बताए।पौडेलले भने, ‘अब पार्टी एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्छ भन्नेमा कुनै दुविधा रहेन। नेकपाको विग्रहको चाहना राख्ने, त्यस्तो शक्ति तथा प्रवृत्तिहरूले अब आफ्नो धन्दा बन्द गरे हुन्छ। शक्ति तथा प्रवृतिहरुले अब आफ्नो धन्दा बन्द गरे हुन्छ।’
शुक्रबार पौडेलको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय कार्यदल गठन भएको हो। बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच भएको छलफलपश्चात कार्यदल गठन भएको थियो। कार्यदलका सदस्यमा भीमबहादुर रावल, शङ्कर पोखरेल, जनार्दन शर्मा, पम्फा भुसाल र सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डे छन्। कार्यदलले दुई अध्यक्षको कार्यविभाजन, अधिकार बाँडफाँडदेखि एकता महाधिवेशनको कार्यतालिकाबारे सिफारिस गर्नेछ। कार्यदलले पार्टीको वैचारिक राजनीतिक बहस, आलोचना, आत्मआलोचना, मन्त्रिपरिषद् हेरफेर, विवादित नियुक्ति बदर, राजनीतिक नियुक्तिमा संस्थागत निर्णय, मुख्यमन्त्री हेरफेरलगायत समग्र विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्नेछ।
प्रधानमन्त्रीले ओलीले एपीवान एचडी टेलिभिजनमा बुधबार प्रशारित ‘द बाभ्रो डेल्टा सो’ कार्यक्रममा अबको ५ दिनभित्रै नेकपाको संकट समाधान हुने बताएका थिए। ओलीले अबको ५ दिनभित्रै पार्टीभित्र नयाँ सिनारियो देखिने उल्लेख गरेको भोलीपल्टबाट छलफल सकारात्मक दिशामा अगाडि बढेको छ। उनले सार्वजनिक गरेको त्यही प्रतिज्ञाअनुसार संकट समाधानका लागि निर्णायक पहल सुरु भएको हो। ओलीले पार्टीभित्रको विवाद ठूलो समस्या नभएको र आफूले एकता बचाउन चुप बसेर कोसिस गरिरहेको स्पष्ट पारेका थिए।